​मतदाता शिक्षाको लगानी प्रभावहिन
न्यूजलय बिहीबार २८, मङि्सर २०७४
विराटनगर । मतदाता शिक्षाका लागि करौड भन्दा बढी खर्च गरिएपनि मोरङमा त्यसको खासै प्रभाव परेन । २१ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको मतगणना सम्पन्न भएसँगै मतदाता शिक्षाको लगानीको उपलब्धिमुलक नभएको पाइएको हो । मोरङमा क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय विराटनगरले मतदाता शिक्षाका लागि सवा करोडभन्दा बढी रुपैयाँ....
​माओवादीको पार्टी कार्यालय कब्जामा
काठमाडैं । माओवादी केन्द्र हुम्लाको पार्टी कार्यालय कब्जा गरिएको छ । हुम्ला जिल्लाको प्रतिनिधिसभा सदस्यमा बागी उम्मेदवार बनेर विजयी भएका छक्कबहादुर लामाको समुहले पार्टी कार्यालय कब्जामा लिएको हो । वाम गठवन्धनका आधिकारिक उम्मेदवार तथा माओवादी केन्द्रका जिल्ला इन्चार्ज छिमी लामाले छक्कबहादुर लामालाई कारबाहीका लागि सिफारिस....
रेशम चौधरीले विजयको प्रमाणपत्र पाएनन्
काठमाडौं । कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभामा विजयी टिकापुर घटनाका मुख्य योजनाकारको आरोप लागेका रेशम चौधरीको प्रमाणपत्र निर्वाचन आयोग काठमाडौं पठाइएको छ ।
दुई दिन भित्र रेशम आफंै उपस्थीत भई प्रमाणपत्र लिन नआए निर्वाचन आयोगले उक्त प्रमाणपत्र काठमाडौं पठाइदिन जिल्ला स्थित निर्वाचन....
​षड्यन्त्र गरेर आफुलाई हराइएको भगवतीको दाबी
इटहरी । सुनसरी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–३ मा नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारसँग पराजित भएकी एमाले उम्मेदवार भगवती चौधरीले आफुलाई षड्यन्त्र गरेर हराएको दावी गरेकी छन् । चौधरीले बुधबार दिउँसो इटहरीमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफुलाई षड्यन्त्र गरेर हराइएकाले जनताले दिएको अभिमतको संरक्षण गर्न कानुनी उपचार....
​सुनसरीका चार वटै क्षेत्रको मतपरिणाम बिस्तृतमा
इटहरी । गत मंसिर २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको सुनसरीमा मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ४ वटा क्षेत्र भएको सुनसरीमा प्रतिनिधि सभा तर्फ २ स्थानमा नेपाली कांग्रेसले बिजयी हाँसिल गरेको छ । भने १ स्थानमा एमालेले बाजी मारेको छ । क्षेत्र....
​ फोरमको विजयी जुलुसमा झडप , प्रहरीद्वारा गोली चलाइयो
बारा । बारामा संघीय समाजवादी फोरम नेपालले निकालेको विजयी जुलसमा झडप भएको छ । पचरौता नगरपालिमा संघीय समाजवादी फोरमले विजयी जुलुस निकाल्दा झडप भएको हो ।
नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई पराजित गरी बारा क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भएका फोरम उम्मेदवार रामसहाय प्रसाद यादवले विजयी....
​खोटाङमा समानुपातिकतर्फ एमाले पहिलो
खोटाङ । खोटाङमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यका लागि भएको निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिएको छ ।
समानुपातिकतर्फ नेकपा एमालेले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेर पहिलो बनेको छ । कूल एक लाख २५ हजार १ सय ८ मतदाता रहेको खोटाङमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि भएको निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ....
महौत्तरी । महोत्तरीमा प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १५ हजारभन्दा बढी मत बदर भएको छ ।
जिल्ला निर्वाचन अधिकारी पिंकी रायका अनुसार मंसिर २१ गते महोत्तरीमा सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा १५ हजार दुई सय ८० मत बदर भएको हो । कूल तीन लाख....
​इलाममा समानुपातिक तर्फ एमाले पहिलो स्थानमा
इलाम । इलाममा समानुपातिक तर्फ पनि नेकपा (एमाले) पहिलो स्थानमा रहेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा एमालेले बढी मत पाएको छ ।
प्रतिनिधिसभातर्फ क्षेत्र नं. १ मा १० हजार नौ सय १३ मतगणना भइसक्दा एमालेले पाँच हजार चार सय ५४ मत, नेपाली काँग्रेसले दुई....
​सुनसरी क्षेत्र नं. ३ मा गच्छदार विजयी
इटहरी । मत गणनाको सुरूवाती समयदेखि नै निकै रोचक बनेको सुनसरी क्षेत्र नं ३ को प्रतिनिधी सभा तर्फ झिनो मतान्तरले नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार बिजयकुमार गच्छदारले बिजयी हासिल गरेका छन् ।
गत मंसिर २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधी तथा प्रदेश सभा निर्वाचन अन्तर्गत सुनसरी क्षेत्र नं....